R & D Team - Southern kwemvura Wearable Technology Co., Ltd.
The R & D centre rinoumbwa Fashion design, zvemaziso, zvemagetsi, software, yokuedzwa uye chirongwa zvakanaka.
1. fashoni magadzirirwo chikwata iri nyanzvi zvipfeko manyorerwo magadzirirwo uye mharidzo nokuitwa maererano chikumbiro vatengi 'kana nokuzvidzora kukura.
2.The zvokuimba chikwata iri nyanzvi 3D zvisikwa uye chakuvhuvhu magadzirirwo.
3. yemagetsi chikwata iri specialized mune digitaalinen redunhu, LF chakagadzirwa dunhu, Zvakanaka hf (RF) redunhu uye simba zvemagetsi redunhu magadzirirwo.
4. Software chikwata iri specialized muna MCU / DSP midzi firmware, PC chikumbiro, vachaparadzanisa kushanda uye IOS / Android kushanda magadzirirwo.
5. The yokuedzwa chikwata iri specialized mune uchida yokuedzwa inonzi akakwana kugadzira.
6. The PM chikwata iri specialized ari manpower, mano, mari / mutengo uye nguva zvakanaka kuitira zvose racho inogona kupedzwa yakakodzera uye vachikurumidza.
The R & D centre ine 520 mativi mita hofisi uye yezvirwere. The kushanda inzvimbo yakanaka uye vakagadzirira pamwe pazasi zvinhu:
Tinotarisa ungwaru pfuma kuwanda. Kusvikira 2nd mwaka 2018, isu vakawana 18 kuvamba patents, 28 utility muenzaniso patents uye 4 chitarisiko patents, kwapera 2 sainzi chirongwa tsvakurudzo pamwe weboka nesayenzi & mabikirwo Dongguan uye duku / svikiro zvebhizimisi weboka Dongguan. Kune rimwe divi, tine zvakawanda zvimwe zvitsva kuvamba patents uye utility womuenzaniso patents dzakamirira.
Nokuda chigadzirwa R & D basa iri kunzwisisa basa, uye vanhu vaiita R & D anofanira specialized zvimwe hwaJehoshafati, redu R & D utariri ari kushandisa chizvaro vashandi yavaive, tsanangurai mumwe purojekiti tsvimbo chinjikira urongwa uye kutaridzwa wehunyambiri tarenda iri vamwe nyaya wehunyambiri urongwa . On the chinjikira basa zvakanaka, hatina basa iye ajaira chigadzirwa marongerwo uye mabasa, uyewo zvakanaka zviwanikwa yavaive uye Kufambisa. Vari kunyanya ruzivo rwokugadzira nyanzvi kana mukuru utariri nyanzvi. On hunyambiri basa zvakanaka, tinoshandisa iye ajaira chigadzirwa ruzivo, zvakaoma sayenzi uye injiniya okufunga uye kugadzirwa rikurumidze. Vazhinji vacho kwazvo injiniya.
12v nenharo Car Seat Cushion, nharo huru Insoles Rechargeable , kushata bhurukwa, kushata Vest, Heating Pad , kushata bhachi,